Wixii otomaatig ah
Sayniska Gawaarida 丨 Fahmida algorithms-ka xakamaynta mootada BLDC
Sayniska Mashiinka 丨 Fahmitaanka BLDC Algorithms Control Motor Hordhac: Macaamiisha waxay ubaahanyihiin qalabkooda guryaha, aaladaha beerta iyo alaabada gawaarida lagu wado inay noqdaan kuwa awood badan, cabirkoodu yaryahay kana waxtar badan yihiin. Sida alaabada badan ee macaamiisha korantada, macaamiisha sidoo kale waxay filayaan kuwan ...
Hab fudud oo deg deg ah oo lagu xukumi karo in BLDC Motor uu fiicanyahay ama xun yahay
Hab fudud oo deg deg ah oo lagu xukumo in BLDC Motor uu fiicanyahay ama xun yahay A. Isticmaal Jadwalka ruxruxa Qalabka ruxruxa wuxuu cabbiraa iska caabbinta kuleylka inta udhaxeysa saddexda waji ee wareega mootada (qiimee 380V danab) iyo caabbinta dahaarka dhulka ( jiiska). Daaha dabku ...
Farqiga udhaxeeya Qiimaha Xaddidaadda Waxtarka Tamarta kadib Hirgalinta Heerka Cusub ee Shiinaha ee loogu talagalay Motors wixii ka dambeeyay Juun 1deeda 2021
Farqiga udhaxeeya Qiimaynta Xaddidaadda Tamarta Tamarta kadib Hirgalinta Heerka Cusub ee Shiinaha ee Motors wixii ka dambeeya Juun 1deeda 2021 Daabacaaddii ugu dambaysay ee heerka qaran ee Shiinaha ee khasabka ah GB 18613-2020 “Qiimayaasha Xaddidan iyo Heerarka Waxtarka Tamarta ee Matoorada Korontada ...
Aqoonta Aasaasiga ah ee Tijaabada Mootada
Aqoonta Aasaasiga ah ee Tijaabada Mootada 1. Sidee loo sameeyaa BLDC Motor No-load Test? Baaritaanka ka hor, hubi BLDC Motor. Dhibaato ka dib, isku xirka korontada saddexda waji ah si aad mootada uga dhigto mid aan shaqeynin adigoon xamuulka jiidan. Kadib hubi dhawaaqa socda, hawlgalka dhalista iyo curr saddex-waji ...
Waagii Hore, Hada iyo Mustaqbalka Joogtada Magnet Motors?
Waagii Hore, Hada iyo Mustaqbalka Joogtada Magnet Motors? Maalmahan, suuqa mootada waxaa hareeyay matoorro magnet joogto ah. Waa wax iska caadi ah in heerka koritaanka matoorrada bilaa buruska magnetka ahi uu ka sarreeyo 100%, nasiibku maahan oo keliya. Heerka kobaca ee matoorrada magnet-ka joogtada ah ayaa sii socon doona muddo dheer ...
Sababaha iyo Xalka Heerkulka Hawlaha Gawaarida Xad dhaafka ah
Sababaha iyo Xalalka Falanqaynta Heerkulka Hawleed ee aadka u sarreeya ee Falanqaynta Sababta Fashilka: 1. Awoodda korantada korantada ayaa aad u sarreysa, taasoo si weyn u kordhisa kululaynta xudunta birta; 2. Awoodda korantada ayaa aad u hooseysa, mootadu waxay ku socotaa culeys la qiimeeyay, iyo currenka ...
Mabaadi'da Ilaalinta iyo Waxqabadka ee Hawlgalka Gawaarida BLD
A. Badbaadinta Culeyska Marka bldc motor uu ku jiro cillad culeys xad dhaaf ah oo uu ka bato heerka la qiimeeyay ee waqti dheer, waxay u horseedi doontaa mootada bldc inay kululaato, yareyso daboolka oo ay gubato. Ilaaliyaha wuxuu xisaabiyaa awooda kuleylka mootada bldc iyadoo loo eegayo astaamaha kululeynta ...
Foomka Xisaabinta iyo Habka Korontada Korontada
Qaaciddada Xisaabinta iyo Habka Korontada Korontada 1. Xisaabinta hadda socota: AC saddex-waji afar-silig oo koronto bixisa, danabku waa 380, danabku waa 220, halka danabkuna yahay xididka 3-waji ee matoorka , danab wareegga waa danab waji ah, iyo danab ...
Faa’iidooyinka iyo Faa’iido-darrada Motors-buraashka
Faa’iidooyinka iyo Faa’iido-darrada Motors Brushless Faa’iidada Motors Brushless: (1) Burush la’aan, faragelin hooseeya Mashiinka bilaa burushka ah ayaa burushka burushka ka qaada, isbeddelka tooska ah ee ugu toosanna waa inuusan jirin dhimbiil koronto ah oo ka dhasha marka matoorka burushku socdo, taasoo si weyn u yareysa faragelinta ...
Astaamaha Awoodda Karti Sare
1. Waxay badbaadin kartaa tamarta waxayna yareyn kartaa kharashka hawlgalka muddada-dheer, kaasoo aad ugu habboon dharka, marawaxadda, bamka biyaha iyo kombaresarada; 2. Mashiinka asynchronous-ka waxaa gebi ahaanba lagu beddeli karaa adoo toos u bilaabaya ama la jaanqaadaya xawaaraha isweydaarsiga soo noqnoqda; 3. Natiijooyinka waxay muujinayaan in dhulka dhifka ah ee joogtada ...
Toban sababaha waaweyn ee gariirka Baabuurta, raadinta iyo dayactirka waxay kuxirantahay kiisaskan gaarka ah
Waxaa jira sababo badan oo gariirka Baabuurta, iyaguna way aad u adag yihiin. Mootooyinka leh tiirar fara badan oo ka sarreeya 8 tiir ma keeni doonaan gariir sababo la xiriira dhibaatooyinka tayada ee soo saarista mootada. Gariirku wuxuu ku badan yahay 2-6 mootooyinka cirifka. GB10068-2000 "Wareegista Mashiinka Gawaarida Gawaarida ...
by admin on 17-06-18
Kuleylka mashiinka wuxuu ka hortagaa isku xirnaanta windings iyo u wareejinta dhulka. Markaad fiirineyso matoorrada, waxaa muhiim ah in la fahmo sida dahaadhku u shaqeeyo iyo sida loo adeegsado. Tusmada 1. Qiimeynta IEC - NEMA Heerkulka Kacsanaanta Nolosha iyo Heerkulka 2. Imtixaanka Insula ...
Wixii su'aalo ah, su'aalo ama amaano ah, fadlan wac: 0086-137 9445 5099 ama buuxi foomka soo socda
BLDC maamusha for Power Qodista, BLDC maamusha qalajiyaha timaha, BLDC Motor maamusha for Qalajiyaha Timaha, FOC BLDC maamusha Power Qodista, BLDC maamusha Motor for Power Qodista, FOC BLDC Maamulaha Gawaarida ee Qodista Awooda, weydiin for pricelist